Mudane Madaxweyne Guux Shacabka Maqal Qalinkii Siyaasi: Abdirahman Mahamoud Jamac ( ABURAAS). | Radio Borama
You are here : Radio Borama » FADHIGA SUBULAHA » Mudane Madaxweyne Guux Shacabka Maqal Qalinkii Siyaasi: Abdirahman Mahamoud Jamac ( ABURAAS).
Posted by admin on December 22nd, 2017 10:34 PM | FADHIGA SUBULAHA
Tan iyo xiligii lagu doortay ee bishii Nov 13, 2017 shacabka Somaliland waxay ka dhursugayeen in ay arkaan isbedel maamul, kobcinta dhaqaalaha, iyo dowlad wanaag. Waayo waxay ku daaleen colaad, qabyaalad iyo musuq maasuq. Waan garan karnaa in ay muddo kooban talada wadanku gacantaada ku jirtey. Laakiin marka la fiiriyo sida hada wax u socdaan waxaa soo baxaya ifafaale yaal aan shacabku ku qanacsaneyn.
Lama dhihi karo dowladaadu wax horumar ah kuma talaabsan. Waxaa horumar laga gaaray dhinaca nabadgelyada caasimada iyo nawaaxiga ku wareegsan. Waxaa kale oo aan la iska indhotiri Karin xaalada dhaqaale, siyaasadeed, iyo nabadgelyo ee wadanku ku sugnaa markii lagu doortay. Somalidu waxay ku mahmaahdaa “ NIN XIL QAADAY EED QAAD” waxaad u bareertay in aad howshaan dhabarka u dhigato. Hase ahaatee waxaa soo baxaya habacsanaan ku aadan horumar la’aanta ama wax qabadka hey’adaha dowliiga ah. Waxaan meesha ka muuqan yididiilooyinkii aad ku hamineysey xiligii aad tartanka ku jirtay oo haldhigoodu ahaa:
waxaan soo celinayaa Sharaftii Qaranka Somaliland
Hadaan dib u milicsano qodobada aan kor ku soo xusnay. Ma ahan suurtagal in aad mudo gaaban ku fulisid; laakiin waxaan ummada Somaliland u muuqan waayey ifafaale tusaya in aad dariiqaas ku socoto. Waxaad ogtahay in aad madax ka tahay dal dadkiisa samirkii ka dhamaaday iyadoo ay u dheertahay caafimaad xumo, shaqo la’aan iyo gaajo ay dhaxleen colaadihii soo maray. Waxay sugeyeen dowlad wanaag, waxay dhowrayeen in aad sharaftii qarankooda soo celisid idigoo ka dheregsanaa in aad wajaheysid cadow badan oo iskugu jira midka gudaha ( maamulo is bar bar yaacaya, baarlamaan qabyaalad iyo laaluush lagu soo xulay, iyo shaqsiyaad raba in ay jeebabka buuxsadan) iyo cadowga dibada ( wadamada deriska, hey’adaha aan dowliga aheyn, iyo wadamada horey u maray) oo midkasta dana gaar ah wato. Waxaan wada ognahay in Wadama shisheeye ay la wareegeen kaabayaashii dhaqaale ee wadanka. Waxaa hortaada lugula wareegay dekada Barber. Iyadoon midkoodna sharciga la waafajinin.
Waxaad ogtahay in aan ilaa maanta qofna loo soo xirin ama shaqada looga casilin musuq maasuq lagu so oogay. Waxaa intaas sii dheer, in la abaal mariyey kuwo badan oo mudooyin dheer lagu eedeynayey in ay boobeen dhulkii iyo hantidii shacabka, in ay musuq maasuqeen mushaarkii ciidanka, shaqaalaha iyo in ay si sharcidaro ah u iibsadeen aqaladii hantida qaranku lahaa . Waxaad afkaaga ka xiratay musuqmaasuqii barqo cad meel fagaare ah lagu qeybsaday hantidii shacabka reer somaliland ee ku astaysnaa gadiidka dawliga ahaa . Waxaan oran karnaa waxaa weli meesha ka maqan hey’adihii dowliga ahaa ee ka hortigi lahaa musuq maasuqaas sida( hey’adii la dagaalanka boobka hantida qaran iyo hey’adihii cadaalada) oo ka howlgala wadanka gobaladiisa oo noqdey kuwo madhan oo jooga dalka.
Sidaad horey u tibaaxday wadan qaranimadiisu ma dhameystirna inta uu ka helayo xaqa, cadaalad iyo wada qaybsi saami. Sidii aad balanqaaday, waxaan u fadhiney in aad u tafaxeydato sidii aad wadankani u heli lahaa cadaalad ku dhisan horumar taasina way ka suuroobi waydey dhankaaga.. Hase ahaatee ummada Somaliland waxay kaaga fadhidaa dhabar adeyg iyo in aad la timaado siyaad cusub oo aad ku maareynayso si aad u gaarto hadafkii laguu doortay.
Ugu dambeentii, waxaa dowladaada laga sugayey hanaan cusub oo siyaasadeed. Waxaadse moodaa in ay cagta saartay wadadii kuwii ka horeeyey ay mareen. Waxaa mudooyinkaan dambe soo baxayey is bar bar yaac, hadalo is burinaya, cadaalad daro laga tabanayo qaybsiga golaha wasiirada somaliland xafiisyada wadanka laga maamulo. Waxaa dowladii iyo hadafkeedii majara habaabiyey shaqsiyaad qabiil xambaarsan, kuwa aargoosi wata, iyo kuwa u soo shaqo tagey in ay maal ka cootaan. Taas waxay horseeday, in la ilaawo hadafkii horumarinta dhaqalaha dalkeena
Waxaan hadalkeyga ku soo gunaanadayaa, wali lagama quusan in la gaaro himilooyinka aan higsaneyno, laakin waxay u baahan tahay in dowladaadu la timaado maskax furan oo ay ku wajahdo arimaha horyaala iyo caqabadaha ka hortaagan. Mudane Madaxweyne, waa adiga cida shacabka Soomaliland ay doorteen. Waxaa la filayey in aad waqtigaan soo booqato gobolada kala duwan ee dalka, in aad soo dhageysato guuxa shacabka, waxgaradka iyo ganacsatada. in aad talooyin ka doontid aqoonyahnada ku kala baahsan dalka gudihiisa .
Waxaa la sugayey in aad caleen qoyan u fidiso shacabka reer Soomaliland ee adiga ku codeyn mantana aad madaxweynaha u tahay.
Waxaan garan karnaa in aysan aheyn arin sahlan laakin waxay u baahantahy in xal loo helo. Shacabka Soomaliland waxaa deeqa cadaalad iyo dowlad wanaag.
« Iskaashatada Muruq- Maalka Degmada Tog Wajaale Oo Cabasho Balaadhan Ka Muujiyay Shirkada Salma Group Ee Soo Dajisa Dadeecooyinka Baaqan U Diray Wasiirka Aramaha Gudaha Somaliland
AMISOM has handed over an assortment of crime investigation equipment to the South West State Police Force to strengthen criminal investigations in the federal state. »